दशौं संस्करणको आईपीएल आजबाट सुरु हुँदै » खबरहरुको एउटै केन्द्र
दशौं संस्करणको आईपीएल आजबाट सुरु हुँदै
बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०८:१३ मा प्रकाशित !
२३ चैत​, काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट (आईपीएल) को दशौं संस्करण बुधबारबाट सुरु हुँदैछ । विश्व क्रिकेटमा लोकप्रिय रहेको आईपीएलको दशौं संस्करण हैदरावादमा बुधबार बेलुका एक कार्यक्रमकाबीच औपचारिक उद्घाटन हुनेछ ।
विश्व क्रिकेटका चर्चित खेलाडीहरु सहभागी हुने आईपीएलको दशौं संस्करणमा आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ । र, हैदरावादस्थित राजिव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेलमा घरेलु टोली तथा साविकको बिजेता सनराईजर्स हैदरावादले रोयल च्यालेंजर्स बैंगलोरको सामना गर्नेछ । दुई टोलीबीचको खेल नेपाली समय अनुसार साझ ८ बजेर १५ मिनेटमा सुरु हुनेछ ।
सन २००८ बाट सुरु टि – ट्वान्टी फर्म्याटको लोकप्रिय आईपिएल आगामी मे २१ तारिख सम्म चल्ने छ । आईपिएलमा सहभागी आठ टोलीले डबल राउण्ड रोबिनको आधारमा खेल्ने छन । जसमा कुल ६० खेलहरु हुनेछन । यस सस्करणको बिजेताले २२ करोड भारु प्राप्त गर्ने छन भने उपविजेताले ११ करोड भारु पाउने छन । यस्तै तेस्रो र चौथोले समान ७ करोड ५० लाख भारु प्राप्त गर्नेछन ।
PREVIOUS POST Previous post: उपत्यकामा रहेका बधस्थलहरु अव्यवस्थित
NEXT POST Next post: स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैले भाग लिनुपर्छ- जर्मनमन्त्री हेन्डरिक्स
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०८:१३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०८:१३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०८:१३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०८:१३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, चैत्र २३, २०७३ ०८:१३